Iyo Martian, naAndy Weir, basa rinokwezva kubva pakutanga kusvika pakupedzisira | Zvazvino Zvinyorwa
Iyo inyaya yesainzi inoverengeka yakanyorwa nevamwe software mugadziri uye komputa theorist, Andy Weir. The Martian inopa kuverenga kwakatsetseka, kunyangwe paine ruzivo rwakawanda rwesainzi rwuripo mumapeji aro mazana mana. Iyo nzvimbo inotarisana neye botanist uye meinjiniya, Mark Watney, mumwe wevanhu vatanhatu vekutanga kufamba pamusoro peMaris munhoroondo yemunhu. Kuverenga bhuku iri kunoyeuka, nekukasira, inozivikanwa HG Wells.
Kana rondedzero yatanga, protagonist ane chokwadi chekuti ndiye achave munhu wekutanga kufirapo, paMars.. Izvi mushure mekusiiwa nevamwe vake (avo vakamutenda kuti afa) nekuda kwedutu rine jecha rinotyisa. Nekudaro, iyo isina tariro maonero anotadza kuputsa kuda kwaWatney. Nekuda kwake kwakanyanya kushinga, hunyanzvi uye kuseka kwakanaka, hunhu unokwanisa kugadzira mukana unogoneka wekurarama. Uku kuverenga kwakakurudzirwa kune vechidiki, zvese nezvechirongwa chayo uye nezvakanaka magadzirirwo.
2 Zvinyorwa zveThe Martian, naAndy Weir
2.1 Kutanga uye kusiririsa kutanga
2.2 Iko kushandiswa kwezvakadzidzwa
2.3 Kumiswazve kwekubatanidza nenyika
2.5 Mafuremu akafanana, hoko huru
3 Kuongorora uye kuenzanisa nefirimu inoenderana
3.1 Kubata kudiki kweyeredzi ruzivo
3.2 Inotora rondedzero
3.3 Unhu hwakanyatsoshanda
3.4 Kuguma pasina kutambisa
Andrew Taylor Weir akaberekerwa muDavis, California, USA, muna Chikumi 16, 1942. Kubva achiri mudiki airatidza matarenda ake seanogadzira komputa. Akadzidza sainzi yemakomputa kuYunivhesiti yeCalifornia (San Diego) uye panguva yehudiki hwake aishandira makambani ane mukurumbira senge AOL kana Blizzard, pakati pevamwe. Mukufananidza, akatanga kuda kwake kwekunyora, sezvakaratidzwa nezvinyorwa zviri pawebhusaiti yake.
The Martian ndiro bhuku rake rekutanga. Pakutanga yaive yega-yakazviburitsa mune yekuendesa fomati (blog maitiro) mukati megore ra2011. Mushure mekushandurwa kwakawanda - angangoita ese akavakirwa pamazano ekutengesa - munyori akatengesa kodzero kuCrown Publishing. Iyi kambani yaive nebasa rekubuditsazve kuburitsa nekuparadzira (muChirungu) kubva muna 2014. Gore rimwe chetero iyo Spanish vhezheni yakatangwa pasi peiyo Ediciones B-Nova chitambi.
Mazhinji wongororo dzakatenderedza The Martian vanga vaine chokwadi. Pamusoro pezvo, mukurumbira wezita iri wakawedzera zvakanyanya nekuda kwekuchinjika kune iyo hombe skrini, inotungamirwa naRidley Scott, kubva muchinyorwa naDrew Goddard uye nyeredzi dzepasi rose-dzakadai saMat Damon muchinzvimbo chaMark Watney akatarisana naJessica Chastain. inomiririra Commander Lewis, pakati pevamwe.
Zvinyorwa zveThe Martian, naAndy Weir
Kutanga uye kusiririsa kutanga
Izvo zvese zvinotanga ne protagonist ari munjodzi yekufa uye akasiyiwa pachena.. Kana ma sensors akapfeka sutu yaMark Watney achiratidza kurasikirwa nekukurumidza kwe oxygen mukati me mhepo ine simba yejecha, shamwari dzake pa Ares 3 mission (yekutanga yakagadzirirwa kuMars munhoroondo) haigone kumubatsira uye vanomanikidzwa kumusiya, se vanotenda kuti akafa ... Nehurombo, iko kukanganisa kwekuzvipira: Watney achiri mupenyu.
Iko kushandiswa kwezvakadzidzwa
Pasina masekondi ekuparadza, protagonist inoda kukurumidza kuona maitiro ekusimbisa sutu yake, iyo yakabayiwa neiyo imwechete kanyanga yakakwevera kure neboka. Kukunda chipingamupinyi, pinda iyo Iva, chiteshi chakashongedzerwa nekugara kwenguva pfupi kwevanhu vari pamusoro peMartian. Asi, zvikonzero zvetarisiro zvinosekesa: ndiyo yaingova yekutanga yemutsetse muhombe wematambudziko kutarisana nawo.
Mako anofanirwa kutora pane rake rese ruzivo rweinjiniya kuti ararame. uye kupedzisa akawanda akakosha ekugadzirisa murabhoritari maanomanikidzwa kugara kweinopfuura gore nehafu. Pamusoro pezvo, kudzidziswa kwaWatney sa botanist - basa rake guru - kuri panguva chaiyo mukugadzira mamiriro ehunhu hwevatorwa hunoshanda.
Kumiswazve kwekubatanidza nenyika
Tevere, Maka anofanirwa kujekesa nzira inoshanda yekutaurirana nepasi.. Rinopfuura rinopfuura mwedzi kubva tsaona iyi, vashandi veNASA vanoona kuti Watney akakwanisa kurarama, asi chokwadi chake chakanyanya kusimba (kunyanya nekuda kwenyaya yechikafu, tisingataure kuti kununura munguva kungave kwakaomera sei).
Chiziviso ichi kuvatori venhau uye kuruzhinji chinotungamira kune mhirizhonga yenhau inozoperekedza misheni yese kubva panguva iyoyo zvichienda mberi.. Mukutaura, vamwe vanogara mu Hermes - Ngarava iri pamusoro pekutakurwa kwemapuraneti- havazivikanwe nezve kupona uye, nekudaro, njodzi yemumwe wavakasiya kuti afa.
Kuchinja kwacho kunoitika apo Mutungamiriri Lewis nedzimwe nhengo ina dzehumishinari (Vogel, Beck, Johanssen naMartínez) vanonzwa nezvemamiriro ezvinhu. Zvino - muchiitiko chinogona kududzirwa sechibayiro uye "kudzikinura" - vashandi vanovhota vachibvumirana kuita kununura kwakaomarara kwe "komuredhi vakasara" Vanoita izvi zvisinei nekuti sarudzo yavo inoreva kuwedzera rwendo rwegore rimwe chete.
Mafuremu akafanana, hoko huru
Mugumo une zvaro "zvemukati-nyaya". Semuenzaniso, mupiro wakakosha weChina nzvimbo chirongwa, avo vanosarudza kupaka chirongwa chakavanzika kuitira kuti vashande pamwe vasina kukumbira chero chinhu. Asi nguva ipfupi: Watney inoita kunge yakachengeteka chikafu chinowanikwa chakaparadzwa nekuda kwetsaona pa Iva.
Kuongorora uye kuenzanisa nefirimu inoenderana
Kubata kudiki kweyeredzi ruzivo
Aya mashoma mazwi akatsoropodza kune basa raWeir akavakirwa pane zvishoma mashoma masayendisiti kubva kune yekuongorora nyeredzi. Dzimwe pfungwa dzinotokodzera se "dzinoodza moyo" chikamu ichi chebhuku uye, kunyanya, mufirimu. Aya ndiwo makakatanwa ezviitiko zvakaburitswa nenyanzvi yezvemuchadenga Beatriz García mukuwongorora kwake Iyo Martian: nezve cinema nesainzi (Network yeAstronomy Chikoro Dzidzo, 2015).
Nekudaro, izvo zvinodikanwa kuti uzive kuti - pamwe- ndapinda zvakadzama mune tsananguro yezvinetso zvepanyama uye zvemasvomhu, kuverenga kwe The Martian zvinogona kunge zvisina kunakidza yeveruzhinji ... Zvichida haisi chikonzero chakakodzera kana ichienzaniswa nedzidziso dzomuviri wefirimu Interstellar (2016), iyo yakawana kugamuchirwa kwakanyanya pakati pevateereri, vatsoropodzi uye vesaenzi.
Chero zvazvingaitika, pane chinhu chisingarambike chekutaura nyaya mukati menyaya yaMark Watney: zvaiti. Kubudikidza nekunyatso shandiswa kwenzira yesainzi ndipo panogona kukunda hunhu hukuru papuraneti. Zvikasadaro, kurarama kwemazuva anopfuura mazana mashanu usina chikafu chakaringana nemvura hazvigoneke. Kunze kwezvo, protagonist anotanga nyaya nekukuvara kwakanyanya muchiuno chake, chimwe chinhu chisiri kukurudzira zvakanyanya.
Iyo protagonist inogamuchira muverengi nemutsara uyo unokanganisa chirauro chiriporipocho: "Ini ndakamisikidzwa." Nekudaro, kukosha kwemunyori ndekwekuchengetedza kufarira kuziva chokwadi chepeji rinotevera, izvi zvinovakirwa pasimba revanhu: simba rekubatsira mumwe munhu ari mumatambudziko. Inoita kunzwa kwekubatana (kunyangwe pakati peanokwikwidza nzvimbo vamiririri) zvinotsanangurwa zvakajeka uye zvinowirirana mubhuku rese.
Andy Weir akatorwa.
Pamusoro pe, Kutendeseka kwaWatney, kutsvinya, kushinga uye nekungwara kwekunyepedzera kunoita kuti zviito zvake zvive zvinopesana musanganiswa, kuda kuzviuraya. Mundima imwe cheteyo zvinokwanisika kunzwa tariro, kutsunga uye kuvimba kwe protagonist pamwe nemitsara yakadai sekuti "ndikaputika, handizozviziva." Zvese izvi zvinhu zvinogadzira - kunze kwekunzwira tsitsi - kuverenga kwekuwedzeredza.
Ehezve, pakati pekunetseka kwepfungwa pikicha inogadzirwa nemukana wekuti kufa kuri pedyo kwakakomberedzwa nekusurukirwa kwakazara kwegwenga rakaomeswa nechando, pane mukana wekusuwa. Panguva idzodzo, hunhu hukuru hunodhonza zvakawandisa uye kuseka kwaari kuzvikurudzira kuti arambe achishingairira muhondo yekurarama.
Kuguma pasina kutambisa
Kuvharwa kwenyaya idenderedzwa rakakwana. Zvakanaka zvinochengetedza kutarisira kune kwakanyanya, pamwe nepfungwa dzinonakidza yaWatney achiri kuita maneuvers akanyanyisa kuponesa hupenyu hwake, pamisoro yese. Nezvikonzero zvataurwa pamusoro, The Martian Iri ibhuku rine zvakawanda zvehunhu hunodiwa kuti hukurudzirwe zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Iyo Martian, naAndy Weir